सुशान्तले एक महिनामा ५० वटा सिम फेरेका थिए….? भिडियाे – Jagaran Nepal
सुशान्तले एक महिनामा ५० वटा सिम फेरेका थिए….? भिडियाे
सुशान्त सिंह राजपुतको नि’धन भएको दुई हप्ता बढी भैसकेको छ। उनका फ्यानहरू यस दुखबाट बाहिर निस्किन सकिरहेका छैनन्। बलिउडमा उनको आत्मह’त्यालाई लिएर अनेकन रहस्यमय कुराहरू खुल्ने क्रम जारी छ।
उनको आत्मह’त्याबारे अनेक सवालहरू उठिरहेका छन् । धेरैले उनको आत्महत्यालाई नियोजित हत्या बताइरहेका छन् । बलिउडमा जरा गाडेर रहेको नेपोटिज्मको सुशान्तको ज्या’न लिएको धेरैको ठम्याइँ रहेकोे छ। बलिउडका धेरै सेलिब्रेटी र सुशान्तका फ्यानहरूले सुशान्तलाई न्यायको माग गरिरहेका छन् ।
सुशान्तको नि’धनपछि सुशान्तको परिवार गहिरो शो’कमा डुबेको छ। यो शो’क जिन्दगीभर रहनेछ। सुशान्तको दु:खद खबर सुनेर उनका पिता बेहोसिको हालतमा पुगेका थिए र गम्भीर बिरामी भएका थिए। पिताको पनि ज्या’न जाने हो कि! भन्ने चिन्ताले सबैलाई पिरोलेको थियो। करिब दुई हप्तापछि सुशान्तको पिताको स्वास्थ अवस्था केही ठिक भएको बताइएको छ।
भारतीय सञ्चार माध्यमसँग कुराकानीका क्रममा सुशान्तका पिताले सुशान्त पछिल्ला केही दिन यता निकै तनावग्रस्त रहेको बताएका छन्। पिताका अनुसार, सुशान्तले पछिल्लो एक महिनाभित्र ५० वटा सिम बदलेकाे खबर भारतिय संचारमाध्यमले जनाएका छन ।
बलिउडले आफूलाई एक्लो पारेको र यसै कारणले आफू त’नावमा रहेको कुरा सुशान्तले आफ्ना पितालाई बताएका थिए। बलिउडबाट आफूलाई विभिन्न किसिमका धम्की आउने हुनाले सिम फेरिरहन परेको कुरा सुशान्तले खुलाएका थिए। यी सब कुरालाई हेर्दा सुशान्त बलिउडको तनावका कारण डिप्रेसनको सि’कार भएको र आत्मह’त्या गरेको बुझ्न सकिन्छ।